OwayenguNgqongqoshe udalule ukuthi uMolefe ‘wawasiza’ kanjani amaGupta | isiZulu
OwayenguNgqongqoshe udalule ukuthi uMolefe ‘wawasiza’ kanjani amaGupta
Cape Town – OwayenguNgqongqoshe wezeziMayini, uNgoako Ramatlhodi, uthuse abaningi edalula izinsolo zokuthi iCEO yakwa-Eskom, uBrian Molefe, kanye noSihlalo wakwa-Eskom, uBen Ngubane, wamfaka ingcindezi yokuthi asize abakwaGupta ukuthi bathathe izintambo emayinini yamalahle eyayiphethwe yiGlencore ngonyaka ka-2016.
URamatlhodi uthi wahlangana noMolefe kanye noNgubane ngonyaka ka-2015 ngemuva kokuphushwa uSihlalo. AmaBhungane abike kanjalo kwi-EWN ngoLwesibili.
“Emhlanganweni, kusolwa ukuthi bafuna ukuthi amise wonke amalayisense eGlencore ezimayini eNingizimu Afrika, kuze kuba le nkampani ikhokha u-R2.17bn wenhlawulo,” AmaBhungane abike kanjalo.
OLUNYE UDABA: BUKA: Wamukelwe ngenhlokomo ‘uPapa Action’ Molefe kwa-Eskom
“Ngathi angizukuzivala izimayini,” uRamatlhodi utshele AmaBhungane. Wayekhathazekile ngokuthi ukuvala izimayini ezine zamalahle kuzokwengeza enkingeni yokunqamuka kukagesi.
Ngemuva kwalokhu, akuphelanga ngisho isikhathi esingakanani uMengameli Jacob Zuma wamxosha njengoNgqongqoshe, wabe esemusa eMnyangweni wePublic Service and Administration ngonyaka ka-2015 waphinde wamkhipha ngokuphelele kwiKhabhinethi yakhe kanye nabanye ongqongqoshe okubalwa nalawo owayenguNgqongqoshe wezeziMali, uPravin Gordhan, ngoMashi kunyaka ka-2017.
Esikhaleni sikaRamatlhodi uMengameli wabe esefaka uMosebenzi Zwane, nokusolwa ukuthi usondelene kakhulu nomndeni wakwaGupta futhi okusolwa ukuthi wahlangana neCEO yeGlencore, u-Ivan Glasenberg, eZurich, ukuze asingathe uhlelo lokudayiswa kwale mayini idayiselwa iTegeta, okuyinkampani yamaGupta.
Okhulumela u-Eskom, uKhulani Qoma, ngoLwesibili ushaye amakhala ngesikhathi lezi zinsolo ezivezwe ngaso ngesikhathi ekhuluma neFin24.
Udaba lokuthengwa kwe-Optimum mine yiTegeta luyavela embikweni woMvikeli woMphakathi ngezinsolo zokulawulwa kombuso, nokuwumbiko uZuma asewudlulisele enkantolo ukuze ubuyekezwe njengoba umyalela ukuba asungule uphenyo.